Home » Arts & Humanities » ၀ဋ်ကြွေးရှိခဲ့ရင် ပြေပါရစေ ရာဇသံရွှေပေ . . .
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်လို့ ခုပြန်ပေါ်လာပြီပဲလေ
.အင်းလေနော့။ ပတ္တမြားတွေ အများကြီးပါတာကို။ ရွှေကလည်း ငါးကျပ်သား ဆိုတော့ မနည်းဘူး ဟိဟိ။
အဲဒီခေတ်က ချက်ကျောက် ပေါ်ပြီလား မပေါ်သေးဘူးလား မသိ။
.အောက်ဆုံးက ပတ္တမြားတစ်လုံးကိုတော့ အတော်ကြိုက်…
လုံးချောလိုလိုနဲ့ သေချာ မသွေးထားပေမယ့်…. ဖြုတ် ရောင်းလိုက်ရရင် ဈေးအတော်ရမယ့်ပုံ…
.ခုလည်း ပညာရှင် ဒေါက်တာလိုင်ဒါကို ဘယ်တော့လောက် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖိတ်ခေါ်ဂုဏ်ပြုမလဲ မျှော်မောနေရဆဲပါ ဦးဦးပါရေ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပြတိုက်ဖွင့်ပွဲ ပရင်စင်တေးရှင်းအတွက် ဖိတ်ခေါ်တာမျိုး လုပ်မယ် မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ စာအုပ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ ဒေါက်တာ လိုင်ဒါက ၀မ်းသာကြောင်း မေးလ်ပို့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ တခြား ဦးစားပေးကိစ္စတွေ များနေတယ်ဆိုတာ သူသဘောပေါက်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားပြတိုက်​က မူပွားကို မှန်​​ဘောင်​သွင်းပြထား​ပေမယ့်​
.ကမ္ဘာပေါ်က တစ်ခုတည်းသော လက်ကျန် ရွှေပေလွှာပါ။ သမိုင်းတန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးလှပါတယ်။ ပြောလို့ ပြောတာမဟုတ်။ သူတို့တွေလက်ထဲရောက်သွားလို့ အခုကျန်နေတာ။ မြန်မာတွေလက်ထဲရောက်သွားရင် ရွှေကိုကျိုပြီး လက်ကောက်တွေ လက်စွပ်တွေ လုပ်ဖို့များတယ်။
မည်သို့ဆိုစေ ရှင်ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားသည် လက်ရုံးရည်တွင်သာ ဘုန်းတောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်၊ နှလုံးရည်ပြည့်ဝသလောက် ခေတ်အခါထက် ရှေ့ပိုပြေးသော အမြင့်မားဆုံး သံတမန်ရေးရာကို နားလည်ခဲ့သော ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်ကို ယခုမှမျက်မြင်ထင်ရှား ပေါ်ထွက်လာသော ရာဇသံရွှေပေက အတိအကျ သက်သေထူနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရာဇဝင်တွင် အောင်မောင်းရွမ်းခဲ့ပြီ။ …
. အောင်မောင်းရွမ်း…ဆိုတာ…ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့်လို့… စဉ်းစားမိသေးတယ်..။
ဒီအစ်မတော်နဲ့… မြန်မာစကားလုံး အသုံးအနှုန်း ချဲ့ထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာတွေ… ထိုင် ဆွေးနွေးချင်သေး…
.မြန်မာစကားလုံးက ဘယ်လိုပြောရပါ့။ လှအောင်ရေးလည်းရတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာကျတော့ မြန်မာစာပေ အားနည်းသွား။ ရသပိုင်းကတော့ ဘယ်လိုရေးရေး ရပါတယ်။
.ဟုတ်ပါတယ် ဦးကြီးမိုက်။ ပညာရှင်ဘက်ကကော ၊ ဂျာမန် စာကြည့်တိုက်မှူး ဘက်ကကော၊ ဂျာမန် MOFA အဖွဲ့ကကော၊ မြန်မာဘက်က ငါတို့စာပေတိုက်ကကော၊ တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမဏီဘက်ကနေ မြန်မာဘက်ကို ရွှေပေမူပွားပေးခဲ့တာ တန်ကြေးကြီးပါတယ်။ ဒီဘက်က ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတယ်။
.၀ဋ်ကြွေးရှိလို့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ အိပ်မောကျခဲ့တာလေ ကကြောင်။ ဒါကို ဥစ္စာစောင့်ဖွက်တယ်လို့ ပြောမလား။
.ကျမ စာအုပ်တွေ မရသေးလို့ပါ လေးပေါက်။ ရတာနဲ့ စာအုပ်လက်ဆောင် ပို့ပေးပါမယ်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်.. တော်တော်သွက်တာလေး.. ထွက်လာမယ်ထင်မိတယ်..။
.သဂျီးရယ် အဲဒါကို ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင် ရာဇသံရွှေပေ အရှုပ်တော်ပုံ ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ထပ်ထုတ်လို့ ရသေးတယ်။ တက်လာမယ့် အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်မယ် မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။
.သွားတက်လေးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ စာရင်းတို့ထားပြီးသား။ ကိုယ်တိုင်က တစ်အုပ်မှ မရသေးလို့။
.ဟိုအရင် ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီးဆိုရင် ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးကို ကျားကုတ်ကျားခဲ ဆယ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ကုန်တာ သိန်းရာချီမယ်။ အခု ရွှေပေကို ငွေတစ်ပြားမကုန်၊ ချွေးတစ်ပေါက် မကျဘဲ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အတိတ်ရဲ့ အရိပ်မည်းကြီး ကို ပယ်ချနိုင်ခဲ့အောင် သမိုင်းဝင် အချက်အလက်တွေ ရတော့လည်း ဘယ်သူမှ တုတ်တုတ်မလှုပ်ကြတော့ဘူး။
အင်းနော် သမိုင်းဘယ်လိုတန်တန် သူတို့အတွက် မတန်တော့ မလုပ်ဘူး။
သေချာတာကတော့ အစိုးရသစ်တက်ရင် ဒီရွာကိုလာကိုလာမှဖစ်ဒေါ့မှာဘာ…
ဟုတ်တယ် ဒီရွာကို လာဖတ်စေချင်တယ်။ တိတ်တိတ်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်
တဝက်တော့ ဖတ်ပြီးပြီ သုတဆိုပေ မဲ့ စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတယ်
.ဒေါက်တာ လိုင်ဒါက အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်နော်။ အင်မတန်စေ့စပ် သေချာလွန်းတဲ့လူ။ မြန်မာကို အထင်သေးစိတ်အခံ နဲ့ အဲဒီ စာတမ်းကို မပြုစုခဲ့ဘူး။
ဒီဆောင်းပါးလေးကို နာမည်ကြီး ဂျာနယ်တွေထဲ ပါစေချင်တယ်။ဒါဆို လူတွေ ပိုသိသွားမှာပဲ။
.ပြောသင့်ပြောထိုက်တာ ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ အာတီဒုံ။ ဆောင်းပါးကို လူသိစေချင်တယ်။ အစိုးရက တမင်ကြီးကို ပညာရှင်ကို နင်းထားတဲ့ကိစ္စ။ ရွှေပေကိုသာ တဂျီဂျီတောင်းတာ။ မြန်မာပြည်ဘက်ကို သိန်းရာချီတန်တဲ့ မူပွားကော၊ 3D ကော ပေးထားတာ ဘာမှ ပြန်မတုန့်ပြန်ဘူး။ ပညာရှင်ကိုသာ စောစောစီးစီး ဂုဏ်ပြုတာလေး ဘာလေး လုပ်ရင် ပြန်ရနိုင်ရက်နဲ့။
အစ်မရေ ၀ယ်မယ်ဝယ်မယ်နဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်သေးဘူး ။ ဒီလတော့ ၀ယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်ရမယ်။